“नेपालकै टप डाक्टर कन्चनलाई हेर्न चितवनमा, डाक्टरसँगै निरु पुगिन आ’इसियुमा (हेर्नुस् भिडियो सहित) – Ap Nepal
डाक्टरको भनाई अनुसार यो वि ‘ष’को डो’ज धेरै भएको हुनाले अस,रले भएको हो । उनै कञ्चनकोलागी भनेर यतिबेला चितवनमा डा. घनश्याम पुगेका छन् । डा. घनश्यामको भनाई अनुसार कञ्चनलाई नि,को हुन कति जति समय लाग्छ होला त ?
तलको भिडियो हेर्नुहोस् ..
Prevभुलेरपनि नखाʼनुहोस् …दुधसँग यी १२ खाने-कुʼराहरु ..